Akon'ny sambo nandefa afomanga nirehitra tany Toamasina
2008-06-26 @ 11:58 in Ankapobeny
Tsy nisy tohiny tamin'ny fampahalalam-baovao ilay sambo nirehitra tany Toamasina. Tombana sy siosio sisa no tena miely ka tsy fantatra izay tena fahamarinany. Fakantahaka ny tany ivelany ve no anton'ny fahamaizana? raha mety ho vy ny "nave" na ny tokotanintsambo any ivelany ary manokana ny mpandefa ireny afomanga ireny mety tsy ho izany kosa ny taty Madagasikara.
Ny re dia miaramila roa no nalefa haingana tany amin'ny hopitaly sady tena ahiana ny ainy. Ra hono izany. Ny hany re dia averina anio alina iny afomanga tany Toamasina iny ary miarahaba antsika hafa rehetra tsy maty fo aman'aina. Hahatratra ny fety arivo mitsingeringerina indray
Mivantana Toamasina: NIrehitra ny sambo nandefa ny afomanga
2008-06-25 @ 17:32 in Ankapobeny
Tsemboka tsy fidiny Ravalomanana. Tamin'ny 7 ora sy sasany katroka dia nirehitra ilay sambo nandefasana ny afomanga tany Toamasina. HIta mivatana tamin'ny televiziona Nasionaly Malagasy izany. Nifarana tsy fidiny ny tany raha mbola nitohy kosa ny teto Antananarivo.